Semalt Expert: Sei Thunderbird Inonzwisisa Imeyili Yangu SeSpam?
Pane chidzidzo chinokosha icho Mozilla akadzidzira mushure mokunge vatumira mameseji emwedzi kumwedzi kune avo vanyoresa. Nyaya inotevera inoda kuda kugovana nekuwana uku. Vazhinji vevanhu vachishandisa mutereriri we email weT Thunderbird kubva kuMozilla vakagamuchira tsamba yavo yekutanga nechitarisiko. Akangwara akaverenga kuti Thunderbird yaifunga kuti shoko rakatumirwa raiva email scam.
Ivan Konovalov, the Semalt Mutevedzeri weMutengi weVatengi, anotaura kuti chokwadi chechinhu chacho ndechekuti kambani haina kuronga kushora munhu wese achishandisa mwedzi wayo wega wega mazano uye chero kushandurwa kwewebsite, iyo tumira kune vashandisi vachishandisa emaimeri - pr links. Yakavatungamirira kuti vazvibvunze zvavakanga vaita zvisina kururama.
Mushure mokuongorora dambudziko uye nekuita zvigadziriswe zvishoma, vakaona kuti hurongwa hunoita kuti hurumende iwedzere painowana URL mune HTML kopi ye email. Nyaya imwechete inobata mamwe mapurogiramu akaita seExpress and Entourage email. Pakave nekunyunyuta kwakafanana neyiyo nyaya iyo Thunderbird inowanikwa nevatengi vavo.
Dambudziko reTilnderbird rakangwarira mukati mewindo re email raiva nokuti vakange vawedzera mutsara wokutengesera kumashoko avo. Vakanyora mashoko pamusoro peNational Wildlife Federation. Chinangwa chacho chaiva chokuwana rubatsiro rwevanhu vazhinji kune sangano, pakudzivirira mhuka dzesango uye mamiriro avo ezvinhu. Pakuguma kwemashoko, yaiva URL kune webhusaiti yavo kune ani zvake aida kugovera pamhosva yavo.
Kunyange kana munhu akawedzera mutsara unotumira muteereri wemaimiti usingatauri spam, zvinogona kuregedza vamwe vaverengi. Izvi zvinotevera kuti zvinyorwa zvepa spam zvingasaona mutauro wacho se spam. Nokudaro, iyo email ichiri kuendeswa kumubatsiri.Kurongwa kwemashoko kunobatsirawo.
Mozilla yakarongedza mutsara unobatanidza kuverenga zvakafanana asi wakasiya chikamu chaiva ne URL. Panzvimbo pokukumbira vanhu kuti vape kune imwe nzvimbo yewebhu yakaratidzwa pamusoro apa, vakakumbira chero vanhu vanofarira kupa nhasi. Mushure mokunge tadzika izvi, nzvimbo yeThunderbird yakanyarara. Icho chakanga chiri chimwe chinhu chokuziva kwekambani. Ndicho chimwe chinhu chavasingafaniri kudzokorora.
Imwe nzira yavanogona kudzivirira dambudziko racho kubva pakugadzirisa ndeyekuwedzera chibvumirano uchishandisa cm_dontconvertlink. Zuva rekunyengedza basa nekuedza kuenzanisa URL mumuviri, kune URL iyo inoedza kubatanidza. Kana vasingasviki, hurongwa hwekunyevera hunoitora semuedzo wekushaya phishing uye saka unobuda kunze kwezaziso idzi. Nokuwedzera kuwedzerwa kwakataurwa pamusoro apa kune unhu hunozivisa chikwata chekutsvaga chibvumirano kana kuita kuti chionekwe. Muchidimbu, ivo vachangosiya iri voga. Nekudaro, kukanganisa kwakafanana neyo inoratidzwa neEmail Thunderbird haina kubuda zvakare.
Chinyararire chete kugadzirisa ndechokuti chero kuongororwa kwehutano mu email hakuoneki mumushandirapamwe. Havazozviratidzi munhoroondo yekuongorora.
Maitiro enyaya yacho, kubva munyaya yaThunderbird, ndeyekuti vanhu, mabhizinesi, kana makambani havafanire kuisa chero maeiripi mune chero kopi ye email yavanoda kutumira. Kana zvichifanira kuti ivo vaite kudaro, vanofanira kubvisa urongwa hwe URL. Kana zvisina kudaro, Thunderbird inotora matanho uye inotora email iyi se spam.